PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-09-27 - Masihleke
Isolezwe lesiXhosa - 2018-09-27 - IINDABA - MANONO MDLAZI
HEE bantase! Yhazi bendicinga, khawume ndibuze kuqala. Xa nithandaza niyambuza uYesu ukuba amanxeba abanjani?
Okanye niyacela nicele, nicele qha? Yhazi bendicinga ke sibetheni imali ngempelanyanga kuphume iJet nokuba yileya yaseNkandla yeR4million siyokubona uYesu.
Tyhini! asingobantu yhazi thina! Oko wavuka uNyana womNtu ngePasika, akukho namnye endake ndamva esithi usendleleni evela okanye eyombona.
Asazi nokuba amanxeba amphatha njani emva kokuxulutywa ngamatye, asazi nokuba izibhedlele zapha zisemgangathweni kusini na kuba ngeba samcela emva kovuko eze nokuba kulapha eNelson Mandela Hospital, kodwa asinabuntu shem ndincamile!
Kodwa ukuthandaza sicela kuye asiyekanga, hayi naye sefane esiphendula kuba enguYesu onentliziyo entle, mna bendingasokuze ndiyenze lo nto beniza kubona.
Ibiza kuthi xa kufika izicelo zenu zemithandazo ndizithathe ndizifake emgqomeni wenkunkuma njengeempepha zezicelo zemisebenzi kwezi nkampani sifak’izicelo kuzo beniza kundibona kakuhle, ndinguMaNtuli kayi-1 “angibhenywa angiyoni ntsango mina.”
Masizameni bantase idibane le mali, ootata yiR500, oomama yiR300 ulutsha yiR200, abantwana ababhatali kuba uthi yena ezwini lakhe: “Bavumeleni abantwana beze kum kuba ubukumkani bamaZulu bobabo,” ngoku baza kuhamba mahala bona. Ndiza kube ndithetha noMaKhumalo malunga nala Jet, mhlawumbi angasenzela nesaphulelo semali yokwenyuka.
Kuza kufuneka sifasteni, sithandazeni zonke zilunga xa sibophe ibhanti ngaxeshanye, mama, tata, sisi, bhuti kungaqhathwana ke bethuna, sizifuna sonke mos iintsikelelo, makungabikho abaza kuzimela phantsi kwebhedi akuthandazelwana tyhini!
Sonke eZulwini siza kubuya siphathiswe oomasikhenkethe nooNoproblem beentsikelelo, andiqondi ukhona ongathanda ezakhe iintsikelelo ziphathiswe umheza, yile nto ndisithi masibeni sonke kule nto, kakade imbila yaswela umsila ngokuyalezela.
Mna ke iJet iza kundifumana kwisikhululo seenqwelomoya samazwe ngamazwe iThelma Mfunda aph’ eMount Fletcher, abanye ke inokuba sakubafumana nakooXhotyeni Airport eMtata, eNosandile Airport eCofimvaba, eSimpra Airport eCorhana, siza kube sithe saaaa bantase ningaxhali. Bhalisa nje igama, mna ndithetha nomqhubi agqithe ngawe kwisikhululo sakho!